သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၈-၁၂) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 5:51 PM | No မှတ်ချက် |
ဟန်းနီးမွန်း လူသတ်မှု စွဲချက်ကို တရားသေ လွှတ်ပေး
ဖိလစ်ပိုင် Hagupit တိုင်ဖွန်းကြောင့် ၂၁ ဦး သေဆုံး
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မီးလောင်မှုအား အမှုဖွင့် အရေးယူ
မတ်တူးယာဉ်၏ ဝင်ရောက် တိုက်မိမှုကြောင့် ''မန္တလာမင်း''''ရွှေနန်းတော်'' နဲ့ Elite တို့ ထပ်ဆင့် တိုက်မှုဖြစ်
ရေစကြိုမြို့နယ်မှာ အရက်အတူသောက်ရင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ရာက လူသတ်မှုဖြစ်
အသက် (၁၄)ရွယ် ကလေးတစ်ဦးမှ ယာဉ်မဆင်မခြင် မောင်းနှင်မှုကြောင့် ဆယ်ကျော်သက် လူငယ် နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံး
မယ်ဆိုင်မြို့ မုန်ဒဲန်းဈေးအနီး၌ မြန်မာအလုပ်သမား အချင်းချင်း ဓါးထိုးမှုဖြစ်
ယီမင်တွင် သင်္ဘောတစ်စင်း နစ်မြုပ်၍ နိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းမည့် အီသီရိုးပီးယား ၇၀ ဦး သေဆုံး
ကပ်ဘေးသဖွယ် ဖြစ်လာသော လိင်အကြမ်းဖက်မှု
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု လာမည့် ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်တွင် ဆက်လက်စစ်ဆေးမည်
မိုဘိုင်းလ်(လက်ကိုင်)ဖုန်းက ဦးနှောက်ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း တရားဝင် ပြဋ္ဌာန်းရန်သင့်မသင့်
ကလေး တစ်ဦး ဓာတ်လိုက် သေဆုံးမှုအား တာဝန်မယူပါက လျှပ်စစ်ဌာနကို တရားစွဲဆိုမည်
တခြားနိုင်ငံသားခံယူထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ မြန်မာပြည်ဝင်ခွင့် ငြင်းပယ်ခံရ
ရန်ကုန်နယ်နိမိတ်အတွင်း စီးနင်းနေသည့် ဘတ္ထရီဆိုင်ကယ်များကို အရေးယူမည်
ဗိုလ်ချုပ်နှစ် ၁၀၀ ပြည့်မွေးနေ့ အကြိုလှုံ့ဆော်ဖျော်ဖြေပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ရှေ့တွင် ကျင်းပ
စပါးခြွေလှေ့စက်မောင်းနှင်စဉ် အမျိုးသားတစ်ဦး စက်ညပ်သေဆုံး
နေပြည်တော် တောင်သူတွေကို တရားစွဲဆို ထောင်ချ
အမေရိကန်လက်ဝှေ့သမား ဆိုင်းရပ်စ် မြန်မာ့ချန်ပီယံ ထွန်းထွန်းမင်းကို အလဲထိုး အနိုင်ယူ
၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း ထွက်ရှိ
အနှိပ်ခန်းနှင့် ကေတီဗွီများ တရားဝင်ခွင့်ပြုပေးရန် လွှတ်တော်တွင် တိုက်တွန်း
မောင်တောအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် စာရေးမတစ်ဦး ပျောက်ဆုံး
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်များ လက်ကိုင်ဖုန်း သုံးစွဲမှုအပေါ် မိဘများ စိုးရိမ်မှုများရှိနေ
KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏ မတရား လုပ်ဆောင်မှုများ အပေါ် ဒေသခံပြည်သူအချို့မှ ထုတ်ဖော်ပြောကြား
Posted: 08 Dec 2014 07:17 AM PST
(ဓါတ်ပုံ ဘန်ကောက်ပို့ စ်) ထိုင်းနိုင်ငံ ခိုထောင်းကျွန်း လူသတ်မှုအတွက် ဖမ်းဆီး ခံထားရတဲ့ မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦးကို ဒီကနေ့ Koh Samui ခရိုင်တရားရုံးမှာ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ရုံးထုတ် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းအစိုးရက သူတို့နှစ်ဦးကို လူသတ်မှု၊ မုဒိန်းမှု၊ တရားမ၀င်နေထိုင်မှု စတဲ့ ပုဒ်မ ၇ ခုနဲ့ တရားစွဲဆို ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ တရားရုံးမှာ လူငယ် ၂ ဦးက အဲ့ဒီအမှုတွေကို မကျူးလွန်ကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့
Posted: 08 Dec 2014 07:12 AM PST
Shrien Dewani ကို အပြစ်မရှိကြောင်း တောင်အာဖရိက တရားသူကြီးက ဆုံးဖြတ်လိုက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်က တောင်အာဖရိကကို ပျားရည်ဆမ်း ခရီး ထွက်ခဲ့စဉ် ကိပ်ပ်တောင်း မြို့မှာ ဇနီး ဖြစ်သူကို လူသတ် သမား ငှားပြီး သတ်ခိုင်း ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲ ခံထားရတဲ့ ဗြိတိန် နိုင်ငံသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် Shrien Dewani ရဲ့ အမှုကို တောင်အာဖရိက တရားသူကြီးက တရားသေ လွှတ်ပေး လိုက်ပါတယ်။ မစ္စတာ Dewani ဟာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး လိင်စိတ်
Posted: 08 Dec 2014 06:09 AM PST
ဘေးကင်းဖို့ နေရပ် စွန့်ခွာသူတွေ အိမ်ပြန်နေကြ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံမှာ Hagupit တိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်း ဖြတ်သန်း တိုက်ခိုက်ရာမှာ လူ ၂၁ ယောက် သေဆုံး ခဲ့ရပါတယ်။ သေဆုံးသူ အတော်များများဟာ မုန်တိုင်း စတင် ဝင်ရောက် ခဲ့တဲ့ Samar ပြည်နယ်မှာ ရေကြီးတဲ့ အတွက် ရေနစ် သေဆုံး ခဲ့ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ တိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်းဟာ အားပျော့သွားပြီး မနီလာ မြို့တော် ဘက်ဆီကို ဦးတည် နေပါတယ်။ တိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်း မတိုက်ခ
Posted: 08 Dec 2014 05:55 AM PST
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ၈.၁၂.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၁၁၃၀ အချိန်တွင် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့မ ရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ ၀င်များသည် သင်္ဃန်း ကျွန်းမြို့နယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ (၅)လမ်းတွင်မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၁၁၂၀ အချိန်တွင် အဆိုပါလမ်းရှိ ပျဉ်ထောင် နှစ်ထပ်နေအိမ်အား ငှားရမ်း နေထိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည့် ဦးတင်ထူး၊ ဦးခင်မောင်ဌေးနှင့် ဦးသိန်းဆွေတို့ မှ မီးပေါ့ဆစွာ
Posted: 08 Dec 2014 05:46 AM PST
အရှိန်မထိန်းနိုင်သော မတ်တူးယာဉ်၏ ဝင်ရောက် တိုက်မိမှုကြောင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်(၂)စီး ထပ်ဆင့်တိုက်မိသည့်အပြင် မတ်တူးယာဉ်မှ လမ်းဘေးတွင် ရပ်ထားသော ခရီးသည်တင်ယာဉ်အား ဆက်လက်တိုက်မိ၍ (၃)ဦးဒဏ်ရာရ နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁ နာရီခွဲအချိန် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်- မန္တလေး အမြန်လမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၂၄၃/ဝ-၁)ကြားတွင် ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်း
Posted: 08 Dec 2014 05:35 AM PST
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ရ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ ၂ဝ မိနစ်အချိန် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ကုန်းတလင်းကျေးရွာနေ ဦးကြည်ညွန့်(၅၄)နှစ်သည် နေအိမ်၌ရှိနေစဉ် တစ်ရွာတည်းနေ ဦးဌေးကြိုင် ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်း၏နေအိမ်တွင် တစ်ရွာတည်းနေ ကျော်သူ(၂၅)နှစ်နှင့် ချောင်းဖျား ကျေးရွာနေ စိုးဦး(၃၇)နှစ်တို့ အရက်အတူသောက်ရင်း စကားများရန်ဖြစ်စဉ် ကျော်သူမှ စိုးဦးအား လက်သီးနှင့်ထိုး၊ လည်ပင်းအား ခြေထော
Posted: 08 Dec 2014 05:09 AM PST
Photo: bangkokpost ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ (၆)ရက် စနေနေ့ ညပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကျင်းရိုင်းခရိုင်၊ ချင်းခေါင်မြို့၌ (၁၄)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦး မောင်းနှင်လာသော ကားတစ်စီးမှာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ တိမ်းမှောက်သွားပြီး လူငယ် နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ကားပေါ်တွင် လူငယ်(၅)ဦးပါလာပြီး အသက်အရွယ်အားဖြင့် အသက်(၁၃)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်ကြားတွင်ရှိသော ကလေးသူငယ်များသာ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သေဆုံးသွား
Posted: 08 Dec 2014 05:05 AM PST
မယ်ဆိုင်မြို့ ၌ မြန်မာအလုပ်သမား အချင်းချင်း ဓါးထိုးမှုဖြစ် တာချီလိတ်မြို့နှင့် နီးစပ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ မုန်ဒဲန်းရပ်ကွက်(၁) ဈေးအနီးတွင် ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့ ညနေ(၃း၄၀)နာရီအချိန်ခန့်တွင် မြန်မာကျပန်း အလုပ်သမား နှစ်ဦး အချင်းချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ရာမှ ဓါးထိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်ပွားပုံမှာ မုန်ဒဲန်းဈေးအနီးတွင် နေ့စဉ် ကျပန်းအလုပ် စောင့်မျှော်နေကြသူများထဲတွင်
Posted: 08 Dec 2014 04:55 AM PST
စန္နာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ အာဖရိကမှ နိုင်ငံရွှေ့ပြောင်း အခြေချမည့် သူများကို တင်ဆောင်လာသည့် သင်္ဘောတစ်စင်းသည့် ယီမင်နိုင်ငံ အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွင် စနေနေ့က နစ်မြုပ်ခဲ့၍ အီသီရိုးပီးယား နိုင်ငံသား ၇၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ယီမင် အရာရှိများက ပြောသည်။ အီသီရိုးပီးယား နိုင်ငံသား အများစုကို တင်ဆောင်လာသည့် အဆိုပါ သင်္ဘောသည် လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီး လှိုင်းကြီး၍ ယီမင်နိုင်ငံ အယ်လ်မာခါ ဆိပ်ကမ်းအနီး နစ်မြုပ်သွားခြင်း
Posted: 08 Dec 2014 04:52 AM PST
လန်ဒန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ဗြိတိန်တွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံ ခဲ့ရသူဦးရေမှာ ၁၁ သန်း ထက်မနည်း ရှိလာသည်ဟု အစိုးရ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ ကလေးများအပါအ၀င် အသက်အရွယ်စုံ ရာနှင့်ချီသော လူပေါင်းများစွာ အပေါ် ရုပ်သံတင်ဆက်သူ ဂျင်မီဆာဗီလ်၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုကြီး အဖြစ်မှန် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ အမျိုးသားအဆင့် ကျန်းမာရေး ကပ်ဘေးတစ်ရပ်သဖွယ် သဘောထားလျက် ထောက်ပံ့ကူညီ လှုပ်ရှား
Posted: 08 Dec 2014 01:27 AM PST
ထိုင်းတောင်ပိုင်း ဆူရတ်ဌာနီခရိုင် လိပ်ကျွန်း ခေါ် ခိုတောင်ကျွန်း လူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ကော်စမွီခရိုင်တရားရုံးမှာ ဒီကနေ့ ကိုဇော်လင်း နဲ့ ကိုဝင်းဇော်ထွန်း ၂ ဦးကို တရားစွဲဆိုပြီး စတင်စစ်ဆေးရာမှာ ၂ ဦးစလုံးက ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိကြောင်း ထွက်ဆိုသွားခဲ့ကြပတါယ်။ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၂ ဦး အသတ်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းရဲက သူတို့နှစ်ဦးကို အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီး
Posted: 08 Dec 2014 01:24 AM PST
အသက်(၆ဝ)အရွယ် အီတလီ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သူ Mr.Innocente Marcolini ဟာ လုပ်ငန်းသဘော သဘာဝအရ ၁၂နှစ် တာကာလပတ်လုံး တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှ ခြောက်နာရီကြာ နေ့စဉ် ရက်ဆက် မိုဘိုင်းလ်(လက်ကိုင်) ဖုန်းပြောရင်း အလုပ်လုပ်နေရသူ တစ်ယောက်ပါ။ သူဟာဘယ်ဘက်နားနဲ့ ဖုန်းပြောလေ့ရှိပြီး ဖုန်းနဲ့ မကြာခဏထိစပ်နေတဲ့ ဘယ်ဘက်ဦးနှောက် အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်း ထဲမှာ ဦးနှောက်အကျိတ်တည်နေပါတယ်။ ကင်ဆာအကျိတ် မဟုတ် သေးသော်လည်း
Posted: 08 Dec 2014 01:05 AM PST
တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ (၄) ရပ်ကွက်ရှိ သုတ ခြောက်လမ်းတွင် (၁၂) နှစ် အရွယ် ကလေး တစ်ဦး ဓာတ်လိုက် သေဆုံးမှု ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ယင်း ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ လျှပ်စစ်ဌာနမှ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိပါက တရား စွဲဆို သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သေဆုံးခဲ့သည့် ကလေး၏ ဖခင် ဖြစ်သူ ဦးအောင်ဇံက ပြောသည်။ မောင်ရဲနိုင် (အသက် ၁၂ နှစ်)သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ဘောလုံး ကစားနေစဉ် ဘောလုံး ရေမြောင်းထဲ ပြုတ်ကျ
Posted: 08 Dec 2014 12:58 AM PST
ပြည်ပနိုင်ငံသား ခံယူထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား တချို့ မြန်မာနိုင်ငံကို မြန်မာ သံရုံးမှာ ဗီဇာ လျှောက်ထားရာမှာ ငြင်းပယ်ခံ ရသူတချို့ရှိနေပါတယ်။ နော်ဝေနိုင်ငံသား ခံယူထားတဲ့ အဆိုတော် မွန်းအောင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးမှာ လူမှုရေးဗီဇာ လျှောက်ထားရာမှာ ထုတ်မပေးဘဲ ၂ ကြိမ် ငြင်းပယ်ခံ ရတယ်လို့ ဒီဗွီဘီကို အခုလို ပြောပါတယ်။ “အရှေ့၁ ပတ်က ကျနော်တို့ အေးဂျင့် ကနေလျှောက်တယ်။
Posted: 07 Dec 2014 11:02 PM PST
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်း ဥပဒေမဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးနင်း မှုတွေကို တာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းတွေက စဉ်ဆက်မပြတ် အရေးယူနေပြီး ဘတ္ထရီ ဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်း အရေးယူ တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင် နယ်စပ်ရေးရာနဲ့ လုံခြုံရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး တင်ဝင်းက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်အမတ် ဦးကျော် မေးမြ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှစ် ၁၀၀ပြည့်မွေးနေ့အကြို လှုံ့ဆော်ဖျော်ဖြေပွဲကို တက်္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ နေအိမ်ရှေ့တွင် စုတိုင်းပြည်(ယုံကြည်ခြင်း တွဲလက်များ)နှင့် ပန်းရဲ့လမ်းအဖွဲ့တို့က ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ လှုံ့ဆော် ဖျော်ဖြေပွဲကို“ပြည်သူ့ထံမှ ပြည်သူ့ထံသို့”ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် လွတ်လပ် ငြိမ်းချမ်း ပန်းရဲ့လမ်းအဖွဲ့မှ
Posted: 07 Dec 2014 10:49 PM PST
စပါးခြွေလှေ့စက် ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ၇.၁၂.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၉၃၀ အချိန်တွင် သန်လျင်မြို့နယ်၊ ဖားကူး ရဲကင်း စခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ ၀င်များသည် သန်လျင်မြို့နယ်၊ ၀င်းခနီးကျေးရွာ လယ်ကွင်း အတွင်း၌ အမျိုးသား တစ်ဦး စပါးခြွေလှေ့ စက်ညပ်၍ သေဆုံးကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ဒါးပိန်ကျေးရွာနေ ကိုဇော်မင်း၊ (၃၄)နှစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဖြစ်စဉ်အားစုံစမ်းရာ ၎င်းသည် ၁၇၃၀ အချိန်ခန့်က အ
Posted: 07 Dec 2014 10:37 PM PST
Photo: Myo Thant Khaing/RFA နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ ဒက္ခိဏသီရိ မြို့နယ် ကူဆယ်စု မန်ကျည်းကုန်းရွာနဲ့ ကုလားကြီးကုန်း ကျေးရွာက ဒေသခံ တောင်သူတွေကို ကျူးကျော်အဖြစ် ယခင်က သစ်တောက တရားစွဲဆို ထောင်ချခဲ့ပြီး အခုအခါမှာလည်း နေပြည်တော် ကောင်စီ တရားမှာ အထူးစီးပွားရေး စီမံကိန်းဇုန်ကို ကျူးကျော်သူတွေလို့ သတ်မှတ်ပြီး နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် စည်ပင်သာယာ တရားရုံးမှာ တောင်သူတွေကို စီရင်ချက်ချ မယ်လို့ သိရ
Posted: 07 Dec 2014 10:26 PM PST
နိုင်ငံတကာ မြန်မာ့ ရိုးရာ လက်ဝှေ့ စိန်ခေါ်ပွဲ တွေကို ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပခဲ့တာမှာ မြန်မာပြည်ချန်ပီယံ ထွန်းထွန်းမင်းကို အမေရိကန် လက်ဝှေ့သမား ဆိုင်းရပ်က တတိယအချီမှာ အလဲထိုး အနိုင်ရ ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစိန်ခေါ်ပွဲ ၅ ပွဲ နိုင်ငံတကာဖိတ်ခေါ်ပွဲ ၃ ပွဲ စုစုပေါင်း ၈ ပွဲကျင်းပတာမှာ မြန်မာလက်ဝှေ့သမားတွေ မျက်နှာပန်းမလှ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလက်ဝှေ့သမား ကျားပေါက်ကို ထိုင်းလ
Posted: 07 Dec 2014 10:23 PM PST
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ၈.၁၂.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၁၃၀ အချိ်န်တွင် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၊ ငမိုးရိမ်(၅)လမ်းရှိ နေအိမ်တွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ပတ်ဝန်းကျင်နေ ပြည်သူများနှင့် မီးသတ်ယာဉ်များ ရောက်ရှိ မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့သဖြင့် ၁၁၄၅ အချိန်တွင် မီးငြိမ်း သွားခဲ့ကြောင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ရောက်ရှိ စစ်ဆေး လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ Yangon Police https://www.facebook.com/yangonpolice?fref=nf
၁၁-၃-၂ဝ၁၅ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ (၁၂)နာရီအထိ ………………. မြန်မာစာ ၁၂-၃-၂ဝ၁၅ ကြာသပတေးနေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ (၁၂)နာရီအထိ …………. အင်္ဂလိပ်စာ ၁၃-၃-၂ဝ၁၅ သောကြာနေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ (၁၂)နာရီအထိ ……………… သင်္ချာ ၁၄-၃-၂ဝ၁၅ စနေနေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ (၁၂)နာရီအထိ ………………. စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာ ၁၆-၃-၂ဝ၁၅ တနင်္လာနေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ (၁၂)နာရီအထိ …………………… ဓာတုဗေဒ ၁၇-၃-၂ဝ၁၅ အင်္ဂါနေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ (၁၂)နာရီအထိ …………………… ရူပဗေဒ
Posted: 07 Dec 2014 10:21 PM PST
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းက အနှိပ်ခန်းတွေကို ဥပဒေ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းတွေ ပြဌာန်းပြီး တရားဝင် ခွင့်ပြု ပေးဖို့ တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ရန်ကင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁ က ဦးသောင်းကျော်က ဒီနေ့ ကျင်းပတဲ့ လွှတ်တော် အစည်း အဝေးမှာ တင်သွင်း လိုက်ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ ရန်ကင်းမြို့နယ်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးခင်က ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းက လူနေရပ်ကွက်တွေမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ကေတီဗွီ၊ အနှိပ်ခန်း၊ နိုက်ကလ
Posted: 07 Dec 2014 10:04 PM PST
မောင်တော အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် စာရေးမ တစ်ဦး ပျောက်ဆုံး နေကြောင်း သူမ၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် မြို့ခံများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ မောင်တော မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် အငယ်တန်း စာရေး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည့် အဆိုပါအမျိုး သမီးမှာ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှစတင်ကာ သူမ၏ ၇ နှစ် အရွယ်သားငယ်နှင့်အတူ ပျောက်ဆုံးသွား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကပြောသည်။ “ပြီး
Posted: 07 Dec 2014 10:01 PM PST
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ဖြစ်သော အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လက်ကိုင်ဖုန်းကို ကျယ်ပြန့်စွာ သုံးစွဲမှုအပေါ် မိဘများ အနေဖြင့် စိုးရိမ်မှုများ ရှိနေကြောင်း ကျောင်းသား မိဘတစ်ဦးက ပြောသည်။ ''အခု ဆင်းကတ်က ၁၅ဝဝ ကျပ်လောက်ပဲရှိတယ်။ ဖုန်းကလည်း ဈေးသိပ်မရှိတော့ ကိုယ့်ကလေးကို ဖုန်းကိုင် စေချင်တဲ့အတွက် ဝယ်ပေးကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေက အင်တာနက် ကြည့်တယ်၊ ဂိမ်းကစားတယ်။ အချို့က မကြည့်သင့်တဲ့ပုံ ကြည့်ကြ
Posted: 07 Dec 2014 09:45 PM PST
၁၉-၅-၂၀၁၄ ရက်တွင် KIA လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ထောင်ထားသော မိုင်းကြောင့် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည့် ဆရာတော် ဦးနန္ဒိမ အား တွေ့ရစဉ် ၂၈-၁၁-၂၀၁၄ ရက်တွင် KIA လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ထောင်ထားသော မိုင်းကြောင့် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည့် ဒေါ်အားညီ အား တွေ့ရစဉ် နေပြည်တော် ၊ ၈-၁၂-၂၀၁၄ KIA လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အနေဖြင့် လူသစ် စုဆောင်းခြင်း၊ အများပြည်သူ အသုံးပြုနေသည့် လမ်းကြောင်းများ၊ ကျေးရွာအနီး ဝန်းကျင်နှင့် တောင်ယာ စိုက်ခင်းတစ်ဝိုက်